Ra’iisul Wasaare Rooble oo sheegay in Xukuumaddiisa ay door weyn siinayso dhalinyaradda Soomaaliyeed – Kalfadhi
Ra’iisul Wasaare Rooble oo sheegay in Xukuumaddiisa ay door weyn siinayso dhalinyaradda Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed oo ku began 15-ka bisha May.
Mudane Rooble ayaa xusay doorkii xornimodoonka dhalinyaradda Sooomaaliyeed ka geysteen iyo inay dhalinyaraddu tahay laf-dhabarta bulshadeena markastana yihiin kuwo door weyn ka qaata hawlaha loogu adeegayo Qaranka.
“Xukuumadda Soomaaliyeed iyadoo garowsan muhiimadda dhalinyaradda Soomaaliyeed, waxay mudnaan gaar ah siinaysaa horumarinta dhalinyaradda Soomaaliyeed iyo sidii loo xoojin lahaa ka qayb galkooda dhinacayadda kala duwan ee nolosha si gaar ahna siyaasadda iyo hoggaaminta Dalka.” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
“Waxaan hubaa in dhallinyaradu ay ka mira dhalin karaan dib-u-dhiska dalkeenna Soomaaliya.”